Kungani Kuqondiswe Kumikhiqizo Yabathengi Isiqala Ukwakha Izitini Zezitini Nosimende | Martech Zone
Kungani Kuqondiswe Kumikhiqizo Yabathengi Isiqala Ukwakha Izitolo Zezitini Nosimende
NgoLwesibili, Novemba 20, 2018 NgoLwesibili, Novemba 20, 2018 UJessica Bruce
Indlela enhle yemikhiqizo yokunikeza amadili akhangayo kubathengi ukusika abalamuli. Okungaphansi kwe-go-betweens, kuncane izindleko zokuthenga zabathengi. Asikho isixazululo esingcono sokwenza lokhu kunokuxhumana nabathengi nge-inthanethi. Nge 2.53 billion Abasebenzisi be-Smartphones nezigidi zamakhompyutha abo, kanye nezitolo eziyizigidi eziyi-12-24 ze-eCommerce, abathengi abasanciki ezitolo ezidayisa ngokomzimba ukuthenga. Eqinisweni, ukucutshungulwa kwedatha yedijithali ngezizathu ezifana nokuziphatha kokuthenga, imininingwane yomuntu, imisebenzi yezokuxhumana, kulula kakhulu kunezindlela ezingaxhunyiwe ku-inthanethi zokubuyiselwa kwamakhasimende.
Ngokuthusayo, ngemibono ethile ye-e-commerce yebhizinisi, izingosi eziku-inthanethi kulezi zinsuku zikhombisa intshisekelo enkulu ekuvuleni imisebenzi yazo yezitini nodaka. Okunye okubizwa ngokuthi ukuchofoza emaphethelweni, lesi simo asisaqondakali kwabaningi.
Uma ucabanga ngemininingwane, i-USA ibhekene nokushesha okukhulu ngejubane lapho izinkampani nezinkampani zivala khona izitolo zazo zishintshela ku-e-commerce. Izindawo eziningi zokuthenga zikuthola kuyinselele ukuqhubeka nokusebenza ezitolo zazo. Ngokwemvelo, e-USA kuphela, izitolo ezingaphezu kuka-8,600 XNUMX zivaliwe ukusebenza kwabo ngo-2017.
Uma lokhu kunjalo, kungani imikhiqizo ye-inthanethi ibuyela ezitini? Uma kungabizi isoftware yemakethe futhi imibhalo ikwenze kwathengeka kakhulu ukuvula izitolo eziku-inthanethi ngezindleko eziphansi ngokuqhathaniswa, pho kungani utshale imali kwenye indlela ebiza kakhulu?
Isandiso, hhayi ukufaka esikhundleni!
Ukuphendula lo mbuzo, kufanele siqonde ukuthi osomabhizinisi basebenzisa izitolo zezitini nodaka njengezengezo ezitolo zabo eziku-inthanethi, kunokuncika kuphela ezitolo zomzimba. Okusho ukuthi, azifani kepha kuyisithuthukisi sezindawo zokuthinta zanamuhla ze-eCommerce. Imikhiqizo ayithutheli izitini, kepha inweba nokuba khona kwayo ku-inthanethi ezindaweni zokuthinta ezingaxhunyiwe ku-inthanethi.
Thatha IBoll & Igatsha Ngokwesibonelo. Lapho uvakashela isitolo seBoll & Branch, ungathola igumbi lokubukisa elihlotshiswe kahle elinezisebenzi ezimnandi nabasebenzi bamakhasimende. Ungathola yonke imikhiqizo evela kumkhiqizo ngaphansi kwalesi sitolo. Kodwa-ke, kukhona ukujikajika lapho ukuthenga kwakho kulethwa ekhaya lakho ngeposi. Isitolo sisalandela iphethini yaso yokuthengisa nge-e-commerce, kepha sisebenzisa izakhiwo zezitini nodaka njengezikhungo zokuhlangenwe nakho, kunokuba sithengise.
Umbuzo uhlala unjalo
Kungani izitolo zezitini nodaka, lapho amakhasimende angathenga ngqo kumadivayisi abo anikwe amandla i-intanethi? Ukubuyela esitinini nasodakeni kubonisa ukuhlakanipha okuthile Imibono yebhizinisi ye-eCommerce lapho izitolo ezibonakalayo sezivele zidonsa izivalo zazo? Akuyona into ephikisayo?
Impendulo ecacile yalo mbuzo ihlala komunye umbuzo:
Kungani izitolo ze-eCommerce zitshala ukutshala izinhlelo zokusebenza zokuthenga ngamaselula lapho amakhasimende esengathenga kuwebhusayithi yawo ye-eCommerce?
Konke kumayelana nesipiliyoni samakhasimende
Enye yezingqinamba ezinkulu zokuthenga nge-inthanethi abathengi bebengakwazi ukuhlangabezana nemikhiqizo njengoba benzile ezitolo ezibonakalayo. Ngenkathi abathengi abaningi basebenzisa izitolo ze-eCommerce njengendawo yabo yokuqala yokuthenga, kusekhona isigaba esikhetha izitolo ezingokoqobo ngoba bangazama imikhiqizo ngaphambi kokuyithenga.
Ukubhekana nale nkinga, izigebenga ze-eCommerce zithanda Amazon futhi Uber babembalwa kwabokuqala ukuvula imisebenzi yezitini nodaka njengesengezo kozakwabo abaku-inthanethi. I-Amazon ithuthukise ukusebenza kwayo okokuqala kwezitini nodaka ngo-2014, okunikeze ukulethwa kosuku olulodwa kumakhasimende eNew York. Ngezigaba ezalandela, iqale izikhungo eziningi zama-kiosks ezitolo ezinkulu lapho bethengisa khona izinto ezisendlini bathatha nezimpahla ezibuyiswayo.
Ngokushesha amanye amabhizinisi amukela lo mbono webhizinisi le-eCommerce futhi avule ama-kioski amancane ezindaweni ezahlukene. Ngakho-ke, ukuba khona ngokoqobo ngokushesha kwaba yimpumelelo. Esinye sezibonelo ezinhle kakhulu ama-Uber kiosks asezindaweni ezidumile ezivumela abagibeli ukubhuka ikhumbi ngaphandle kohlelo lokusebenza lweselula.
Umqondo oyisisekelo ukunikeza ukuxhumana okuqondile komuntu kanye nesipiliyoni samakhasimende kubathengi abakwi-inthanethi, ngokungeziwe ku -
Ukufaka ibhizinisi ebhizinisini lomhlaba
Ukuthola amathuba amaningi ebhizinisi kumvelo eku-inthanethi naku-inthanethi
Ukuthuthukisa ulwazi lwamakhasimende lapho bazi khona ukuthi bangavakashela kuphi uma kunesikhalazo.
Ukuvumela amakhasimende ngokushesha ukuthi azame futhi asuse ukungabaza ngemikhiqizo.
Ukuqinisekisa ubuqiniso bokusebenza ngokubazisa “Yebo! sikhona nasemhlabeni wangempela ”
Inhloso enkulu ukushaya umncintiswano ngokunikeza okuhle kakhulu kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende, ukugcina induduzo yabo engqondweni. Lokhu kungahle kuphume esikweni futhi ukuqhamuka nemibono emisha kuyindlela yokugcina amakhasimende futhi iwine ukuguqulwa ngo-2018. Uma ubheka ubuningi bomncintiswano ezitolo ezenziwa online, kuwumsebenzi omkhulu uma ungakhuthazekile ukwenza kanjalo nge eCommerce ibhizinisi.
Ukubuyisela kabusha kwamakhasimende ezitolo ezibonakalayo?
Umkhakha obalulekile lapho izitolo zomzimba kuphela zehlulekile ukuncintisana nezimbangi ze-eCommerce kwaba ukubuyisela emuva kwamakhasimende. Ngaphandle kwabanye abalandeli be-hardcore brand, izitolo ezibonakalayo bezingakwazi ukugcina noma yimaphi amakhasimende. Njengoba bekungekho ndlela yokwazi indlela yokuziphatha nokuthengwa kwamakhasimende, izitolo zomzimba zehlulekile ukuqoqa idatha edingekayo yokuphindisela kabusha kwamakhasimende. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kwezikhangiso ze-banner, i-SMS, kanye nokumaketha nge-imeyili, bekungekho enye indlela yokuxhumana ngqo namathemba. Ngakho-ke, nemikhankaso emikhulu yesaphulelo yehlulekile ukufinyelela izethameli eziqondisiwe.
Ngakolunye uhlangothi, i-intanethi nama-smartphone asezandleni, amakhasimende aku-inthanethi aba yinto elula ekuqondisweni kabusha kwe-eCommerce. Izindawo ezithintwayo ze-E-Commerce zinezindlela ezingenakubalwa zokuqoqa idatha yamakhasimende: Ifomu lokubhalisa i-Akhawunti, izinhlelo zokusebenza zeselula, ukumaketha okuhambisanayo, ukuphuma kwe-pop-up, amafomu okubhalisela ukubuyela emuva, nezinye eziningi. Njengoba kunezindlela eziningi zokuqoqa idatha, i-eCommerce nayo ibinezindlela ezikahle zokufinyelela kumakhasimende: Ukumaketha nge-imeyili, ukumaketha kwe-SMS, ukumaketha kwe-Push, ukukhomba kabusha kwezikhangiso, nokunye okuningi.
Ngokusebenza okuhlanganisiwe kozakwabo bomzimba nabaku-inthanethi, ukukhonjwa kabusha kwamakhasimende kuhambe kahle kakhulu. Lokho obekuyinkinga yokuthengisa ngokomzimba kanye akusekho nzima ekusebenzeni kwezitini nodaka. Izitolo eziku-inthanethi manje sezingasebenzisa iziteshi ezifanayo zokumaketha zezindawo zazo zokuxhumana eziku-inthanethi futhi zisakhanga izivakashi ezikhungweni zazo zomzimba. Okulandelayo ukuthi eminye imikhiqizo edumile ikwenza kanjani lokhu.
Ama-brand amakhulu asebenzisa ukumaketha kwesiteshi se-Omni ngezindlela zawo
I-Everlane yazisungulela ibhizinisi eliku-inthanethi kuphela ngo-2010. Ngokuqondisisa ngqo ekusebenzeni kwamakhasimende, u-Everlane wabhalwa ngokuletha izimpahla ezisezingeni eliphezulu ngamanani aphansi. Iqhubeke nokukhula nefilosofi yayo yokubonakala okucacile, lapho uphawu ludalula amafektri alo, izindleko zabasebenzi, nezinye izindleko eziningi.
Ngo-2016 kuphela, umkhiqizo wakwazi ukuthola i- inani lokuthengisa lamaRandi ayizigidi ezingama-51. Ngemuva kokwethula uchungechunge lwama-pop-up engxenyeni yakamuva ka-2016, lo mkhiqizo walungisa indawo yokubukisa engamamitha-skwele angu-2,000 XNUMX esifundeni saseManhattan SoHo. Lesi bekuyisinyathelo esikhulu uma kubhekwa isitatimende se-CEO yenkampani uMichael Preysman eminyakeni embalwa eyedlule:
[Sizo] vala inkampani ngaphambi kokuya ezitolo ezithengiswayo.
Yilokhu inkampani ekushoyo ngokungena kwayo ekuthengisweni okungaxhunyiwe
Amakhasimende ethu abelokhu etshela ukuthi afuna ukuthinta futhi azwe imikhiqizo ngaphambi kokuyithenga ekugcineni. Saqonda ukuthi sidinga ukuba nezitolo ezibonakalayo uma sifisa ukukhula ngezinga likazwelonke nelomhlaba jikelele.
Lesi sitolo sidayisa izikibha ezinophawu lwendlu, amajezi, ama-denim nezicathulo. Basebenzise ubukhona bomzimba ukunikela ngesipiliyoni esihle kunazo zonke kumakhasimende avakashele esitolo. Indawo yokuphumula enendawo yokuhlobisa nezithombe zangempela zefektri yabo ye-denim ingeza enkazimulweni njengoba ithuthukisa ifektri yomkhiqizo njengemboni ye-denim ehlanzekile kunayo yonke emhlabeni.
Njengoba uhlola ngokuqhubekayo, ungathola amayunithi amane wokubonisa anendawo ehlukile yokuphuma. Izisebenzi zase-showroom azigcini nje ngokuthengisa izingubo, kodwa futhi zisiza amakhasimende ukuthi abheke imikhiqizo ngokushesha. Beza nezincomo ezenziwe zaba ngezakho ngemuva kokuhlaziya iphrofayili yakho efakwe kumlingani wabo oku-inthanethi.
Yize eyisidlali esiku-inthanethi, uGlossier uyaqonda ukuthi imisebenzi yomkhiqizo ongaxhunyiwe kwi-inthanethi idlala indima enkulu ekubandakanyeni isisekelo samakhasimende. Ngezitolo zayo ezidayiswayo, lo mkhiqizo uyaqhubeka nokusebenzisa izindawo zawo ezihlukile. Umkhiqizo uchaza ukuthi ama-pop-up ayo awakhulumi ngemali kepha kwakhiwa umphakathi. Imane nje iphathe izindawo zayo njengezikhungo zokuhlangenwe nakho kunokuba iphoyinti lokuthengisa.
Muva nje, lo nobuhle asebenzisane nendawo yokudlela eyaziwayo iRhea's Café, eseSan Francisco. Ushintsho olungaphandle lwendawo yokudlela ukuze ilingane nobunikazi balo ngopinki weminyaka eyizinkulungwane lumemezele lo myalezo ngokuzwakalayo. Ngokushesha indawo yokudlela yaguqulwa yaba yindawo yokuhlangenwe nakho kwezimonyo, lapho abapheki bepheka khona ukudla ngemuva nje kwezibuko kanye nezinqwaba zemikhiqizo evela eGlossiers. Ngokwesivakashi esivamile se-pop-up, uzothenga imikhiqizo yeGlossiers online uqobo. Kodwa-ke, ngaphandle kwazo zonke izingqinamba, uthanda ukuza lapha kanye ngesonto ukuzwa nje amandla amahle egumbini. Ngaphezu kwalokho, kuzwakala kumangalisa ukuthinta nokuzizwa ngemikhiqizo ngenkathi ungathatha inkomishi yekhofi ngasikhathi sinye.
Uma kukhulunywa ngokuhlangenwe nakho kwamakhasimende, izinhlobo zezingubo zingenye yezindlela ezinkulu zokumaketha eziteshini ze-Omni. I-Bonobos - umthengisi wezingubo zabesilisa esigabeni esifanayo waqala ngokukhethekile ngokuthengisa okuku-inthanethi ngo-2007. Imele esinye sezibonelo ezifaneleke kakhulu zemikhiqizo eyimpumelelo ethola ukukhula ngokuqhubeka nokusebenza kwayo nasezikhungweni zezitini nodaka.
Namuhla, iBonobos inkampani eyizigidi eziyi-100, enesiphakamiso esiqinile esiyingqayizivele, ukusekelwa kwamakhasimende okuvelele, kanye nokuthenga okuhle kakhulu. Umkhiqizo ungenza idumela lawo ngokuhlangana kokulungele ikhasimende elithile. Okuhlangenwe nakho eBonobos Guideshops kudlulela ngaphezu kokunikeza isilinganiso sakho sokhalo nomthengisi ekhombisa ibhulukwe elihambisanayo.
Esikhundleni sokuvakashela isiza seBonobos, lo mkhiqizo uncoma ukubhukha i-aphoyintimenti yokuvakasha okwenzelwe enye yezindawo zayo eziningi ze-Guideshops. Uhlelo lokubhuka ngaphambilini lusebenza kahle kakhulu njengoba lungaqinisekisa ukuvakashelwa okunethezekile lapho kugcinwa abantu abambalwa kuphela futhi ummeleli owabelwe anganikeza konke ukunakekelwa okudingayo ukuze uqedele ibhulukwe elifanela okuhamba phambili.
Le ndlela isebenza ngayo yonke inqubo, ngokusho kukaBonobos:
Izikhungo zokuhlangenwe nakho kwezitini nodaka zinikeza amathuba amahle kakhulu wokuvala igebe phakathi kwezitolo zomzimba neze-eCommerce. Leli qhinga le-Omni-channel eCommerce lisiza izitolo ze-eCommerce ukuletha ulwazi olungcono kakhulu lokuthenga ngenkathi ikhomba amathemba kuzo zombili izindawo ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi. Ukugcina umgomo oyinhloko ubhekiwe, ama-brand ahlangabezana nokulindelwe okuyinkimbinkimbi kwamakhasimende ngazo zonke izinzwa nokubamba iziteshi eziningi zokumaketha. Izitini nodaka empeleni akusona isiteshi esiphelelwe yisikhathi kepha kuyimpahla ethuthuka ngokushesha futhi eyigugu kubadlali abakhona be-e-commerce.
Tags: Amazonboll negatshaigatsha le-bollBonobosindawo yokuthengisa ye-bonobosisitolo se-bonobosizitini ne-mortarisipiliyoni samakhasimendecxngqo kumthengiezokuhweba ngekhompyuthaeverlaneI-Glossierindawo yokuthengisa yama-glossierisitolo se-glossierizikhalaisoftware yemaketheizitolo ezitoloisipiliyoni sokuthengaUberüber zinsiza
Ngiyi-blogger enobungcweti, umbhali wezivakashi, i-Influencer kanye nochwepheshe we-eCommerce. Okwamanje kuhlotshaniswa ne-ShopyGen njengecebo lokuthengisa lokuqukethwe. Ngiphinde ngibike ngokwenzekile kwakamuva nezitayela ezihambisana nomkhakha we-eCommerce.